Ecinga amakhasi omlando, ngamunye wethu uke wahlangana ngokuphindaphindiwe namatshwayo lamazwe, amakilasi, izizukulwane - izingalo. Indawo ubuchwepheshe, okuyinto Kunikezelwa ekutadisheni okuqukethwe semantic linamathele elingenamikhono izingalo libizwa heraldry.
Kuyini heraldry? Kuchazwa imiqondo. Uhlolojikelele
Uma uthatha definition yesayensi eqonde kakhulu, le heraldry - lena indawo emlandweni okhuluma ekutadisheni amajazi izikhali, umlando wabo kanye namagugu. Le nkulumo ungwaqa ngegama elithi "heraldus", okuyinto zihunyushelwe izindlela Russian "Ummemezeli". Abakhulumela eRussia ngokuthi Lumemezela, owachaza elingenamikhono izingalo zenkosi yayo.
Obumavukuvuku izikhali kubonise isimo impahla kanye nomphakathi womnikazi wayo. Yingakho value etholwe heraldry. Ukuzimisela ukuvela lo mkhuba kufundvwe-mlando eziningi.
Isiko yokudala amajazi izikhali uvele eYurophu ngemva Yenkolo Yokuqala. Ngaleso sikhathi, Knights tournaments ukuhlonza zempi kwakubangela ubunzima obukhulu, futhi abahlanganyeli ukuvakasha akazange ukuhlukanisa nomunye. Ngakho-ke ezicukuthwaneni waqala zihumusha izithombe panel ahlukahlukene nezikhali, eyasebenza njengodonga umfutho ukuze kwakhiwe amatshwayo ngaphambilini. Ngokuhamba kwesikhathi, okubangelwa izimpawu babé yinto ulimi esingashiwongo ukuthi lapho uphawu wawunencazelo lalo. Ekuqaleni, le zempi ukuboniswa izilwane nezinyoni. On izingalo isikhathi ngaya umfanekiso ukulwa izimpawu yezikhali wamabutho wasendulo - imicibisholo, imikhonto izinkemba. Kwezinye izimo, panel ukuboniswa impahla eyayithengwe knight.
Ngaphambi yesibili impi izimpawu wathola ukuma okokugcina, futhi izifanekiselo ku tournaments knightly baye sekuyinsakavukela. Ukuthuthukiswa yesithombe kwezimpawu phezu amabhodi ivumela ukuhlukanisa knight sejazi izingalo. Kwakamuva ekugcineni kwaba sobala ukufanekisa accessory ekilasini. Badlulile, okuyilona elisebenzayo futhi isici isici. Uma sibheka esikhathini samanje, singabona ukuthi uma zingamagugu angamafa umndeni yizicukuthwane umehluko, zingabantu ukuma efanayo elidala ezikhangiso abasunguli lwamagama lasendulo.
Heraldry amajazi izikhali uyazicabangela njengoba umthombo ethize kolwazi. Idatha etholwe isifundo izimpawu kuboniswe izingalo, laba kanjani nesandla replenishment ulwazi ngezenzakalo emlandweni, kanye evulekile ngendlela ekusungulweni izibopho kwezomnotho kanye namasiko aye akhona esikhathini esinikeziwe isikhathi. Ngokwenza ucwaningo heraldry, izazi-mlando ukucacisa ubunikazi amadokhumenti noma izikhumbuzo ngomuntu othile, ukusungula ubuqiniso yokuthola.
Elingenamikhono izingalo - ke iwuphawu ukuhlonza zomthetho, ukulungiswa nokugunyazwa imithetho ecacile. It ukhonza njengelungu umehluko unomphela ngoba ubuso, uhlobo inhlangano yomphakathi, isifunda, kanye nesimo.
Izazi-mlando eziningi obulokhu uzibuza wona yini heraldry. Incazelo yaleli umqondo statists zimi kanje: uphawu eyisisekelo khona umbono kazwelonke. Kunenye definition okunye. Heraldry - kuyisihluthulelo ekukhuleni kahle isimo futhi eqinisa isikhundla yayo ezimele.
Inqubo ukuqaqwa kanye nencazelo amagugu izifanekiselo Kusolwa isiyalo asizayo - yezikhali. Isayensi ihlola umlando ukuthuthukiswa kohlaka umkhakha ulwazi tekuhlelwa, ukudluliswa kanye nokusetshenziswa amajazi izingalo kanye nezinye izinto, impahla yabo, kuye ngokuthi indawo kanye nesikhathi wendalo.
Ngenxa isiyalo yesayensi kule ndawo yolwazi uvezwa ezigabeni eziningana. Loluhlelekile noma theory, heraldry iye ucwaninga imithetho yokwakha sejazi izingalo futhi amagama echaza ke. Ukuze isayensi yangasese libhekene Ukucabangela izinto ezifana elingenamikhono izingalo, mottos. endaweni Isicelo ikhuthaza isifundo zesichasiso kanye ukuhlonza imibhalo ehlukahlukene artefacts sibalo kuboniswe isibonakaliso.
Akufanele sibakhohlwe leso siqondiso, njengoba heraldry esisebenzayo, okuhloswe ngalo ukudalwa amajazi entsha izingalo, ushintsho zabo futhi baletha umugqa nemithetho ekhona, kanye nokucutshungulwa umlando imvelaphi.
Heraldry futhi indima yalo kuleli kuvisisa umlando
Heraldry kuyinto kwesigaba ebalulekile zomlando humanities. Wanqoba ibanga elide kusukela ekubeni igatsha osetshenziswayo i isayensi ezimele ukuthi has izindlela ayo cwaningo kanye nokuhlaziywa izincwadi zomlando.
Isidingo incazelo elingenamikhono izingalo esaphakama lapho kwakukhona lokuqala izingxenye umehluko. Ukuze ukwazi ngokunembile futhi kahle ukuchaza uhlamvu enjalo ukuthi akukhona umfanekiso ezibukwayo athuthukile amagama, elibhekene nomse- amazinga ukukuqeda bobunjwa, imihlobiso, kanye nezinye izingxenye. Kungenzeka ukuhlonza kanye heraldry njengenhlangano ensimini ezimele yolwazi.
Ochwepheshe ukukhomba izici ezimbili zale isayensi, okuyinto enze kube nokwenzeka ukuba aqonde ukuthi yini heraldry. Inchazelo uthi: lokhu iyiqoqo amajazi izingalo kanye nobuchwepheshe babo. Izindlela kukhona sokugcina ukucaciseleka ezilandelanayo sejazi kazwelonke izikhali umnikazi izesekeli, izimo zawo, izihloko, isikhathi, ukudala nokushintsha isibonakaliso. Heraldry ulimi ngokuthi "blazon", okuyinto ikuvumela ukuba ukudlala emuva isithombe incazelo.
Ohlukile futhi okwakhe yesayensi ye amajazi izikhali
Heraldry usengakwazi kubizwe ngokuthi isimiso eziyingqayizivele ukuhlonza impahla kwasobala nokwabantu ngabanye. Imisebenzi eminingi zomlando unamathisele ukubaluleka kule legatsha wesayensi heraldry. Inani lale isiyalo zomlando ezinkulu ngoba ulwazi etholakale isamba isithombe ingqikithi isikhathi.
Heraldry - akusiwona nje ithuba lokufunda eyayinawo elingenamikhono izingalo lapho evela. Abaningi bangavuma ukuthi siphathe njengobufakazi igatsha ucwaningo lwesayensi akwanele. Kubalulekile acabangele okuqukethwe komphakathi umqondo. Kuyini heraldry? Kuchazwa nokusebenzisa kulendawo enze kube nokwenzeka ukuba ubuyisele izimpande lwenzalo yabo, ukuthola umsuka umndeni lendabuko.
Nini futhi kuphi iisus hristos wazalwa?
Impi esheshayo engahlomile kakhulu Soviet "Dmitry Donskoy". Cruiser "Dmitry Donskoy": 65 iphrojekthi
Battleship "Potemkin" - umkhumbi inguquko
Boxer Rebellion: incazelo, umlando, imigomo, izimbangela kanye nemiphumela
Izinsiza eziphilayo yoLwandle Azov nokusetshenziswa komuntu
Unquma kanjani ukuthi umuntu kakhulu ayinandaba? A izindlela ezimbalwa ezilula
Comedy "ephelele ukuguqulwa": nabalingisi izindima
Ukuxhumana nomphakathi: kanjani ukuba uthole stickers mahhala kule "EC '
Ekhuluma kwi-inthanethi. Uyini-URL endleleni, isizinda, IP-ikheli
Umsebenzi ku-IT Panda: intsha futhi inenjongo
Amaconsi namazeze "Bars Forte": yokusetshenziswa, ukwakheka, incazelo kanye nokubuyekeza
Sultanate of Oman: Managing
Izici Jikelele izilwane zasemhlabeni: isakhiwo sangaphakathi, amathambo, ukuthuthukiswa